Hanor Textile iri Ningbo China, kunyanya kugadzira uye Export zvakasiyana-siyana Textiles mwana uye musha Textiles. Textile yedu chigadzirwa mitsetse zvinosanganisira mwana gumbeze, mwana fidha, mwana swaddle, mwana washcloth, mwana rakanga rakapfeka zvinovhara kumeso tauro, mwana burp jira, mwana mutambo, mwana bathrobe uye mwana nenguo. Nesuwo dzidzira muna nemvere gumbeze, bhati tauro, pamhenderekedzo tauro, mukuru bathrobe, pamutsago, piro pakavha uye mubhedha marata.
Hatina vakaumba zvakanaka bhizimisi ukama vatengi vari pamba uye kunze. Tiine akapfuma ekisipoti ruzivo, yepamusoro zvigadzirwa, yemakwikwi mitengo, mukuru webasa uye pamusoro-nguva delivery, zviri zvakanaka kuti tinogona kusangana yenyu zvinodiwa uye kupfuura zvaunotarisira.
Tiri kugara kutarisira kuwedzera yedu vatengi chawo. Kana uchifarira chero munhevedzano wedu, tapota nesu mamwe mashoko. kugutsikana kwako kuri chinangwa zvatinoita, chero Kubvunzisisa mubvunzo achava kutarisirwa zvakanaka uye nokukurumidza mhinduro dzedu dzakakwirira kunyatsoshanda, nomwoyo wose.